Voalaza fa Honor 7C dia voasivana noho ny TENAA ary ireo no fangarony | Androidsis
Voalaza fa Honor 7C dia voasivana noho ny TENAA ary ireo no fampiasa ao anatiny
Rehefa avy miresaka aminao momba izany Huawei Ankafizo 8 izay tafaporitsaka niaraka tamin'ny mombamomba azy teknika sy sary maromaro, izao dia hataonay momba ny a fampianarana Honor 7C, finday iray hafa izay, araka ny hita, dia teo akaikin'ilay voalohany tamin'ny fotoana nanamarinana an'i TENAA, izay misy koa endri-javatra sy specs sasany vao naseho misaotra an'ity regulatera sinoa ity.
Araka ny TENAA, Ity terminal ity dia misy fiasa maromaro mitovitovy amin'ireo izay entin'ny Enjoy 8 izany, noho ny antony iray ihany, dia hanombatany azy io amin'ny elanelam-potoana mitovy. Mampita ny vaovao aminao izahay!
Araka io regulator io, izay mitovy amin'ny FCC, ny Honor 7C dia tonga miaraka amin'ny efijery mitovy amin'ilay Enjoy 8, izay HD + miaraka amin'ny vahaolana 1.440 x 720 teboka, izay manondro fa tahan'ny lafiny 18: 9.
Eo ambanin'ny hood Ity dia manana RAM 3 / 4GB miaraka amin'ny habaka fitahirizana anatiny 32GB mivelatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 256GB.
Amin'ny lafiny iray, ny Honor 7C dia manana CPU octacore 1.8GHz, Android 8.0 Oreo dia efa napetraka miaraka amin'ny sonia Emotion UI 8.0 customization layer, miaraka amina fakan-tsary avo roa heny amin'ny 13 sy 20 megapixels ny vahaolana miaraka amin'ny LED Flash sy mpamaky ny dian-tànana, ary eo alohany, araka ny sary nomen'ny TENAA, miaraka amina sensor indroa izay mbola tsy ananantsika fampahalalana momba ny fanapahan-kevitry ny tsirairay, na dia iray monja aza no tondroina, ary, raha ny filazan'ity regulator ity dia 8MP ... Tsy maintsy miandry ny vaovao ofisialy hazavao izany.
Mikasika ny fizakan-tena, ity finday ity dia manana batterie 2.900mAh. Ary, mikasika ny refy sy ny lanjany, 158.3 x 76.7 x 7.8 mm ireo, ary milanja 164 grama.
Ary farany, ny Honor 7C, izay, teny an-dalana, dia ambanin'ny anarana maodely 'LND-TL30' ho an'ny kinova misy RAM kely kokoa, ary 'LND-TL40' ho an'ny iray hafa, hanolotra eo antenatenan'ity taona ity izy ireo. Ho fanampin'izay, ho tonga amina kinova telo izy ireo: mainty, volamena ary manga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Voalaza fa Honor 7C dia voasivana noho ny TENAA ary ireo no fampiasa ao anatiny
Honor 9 Lite dia havaozina amin'ny fisokafan'ny tarehy
Navoaka ilay Cat S61 mikitoantoana. Fantaro ny mampiavaka azy sy ny pitsopitsony teknika!